Burmese, Tracts, ဝေစာ 02 -- အပြစ်များသော အကျွန်ုပ်ကို သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဘုရားသ | Waters of Life
Home -- Burmese -- Tracts -- Tract 02 (God, be Merciful to MeaSinner!)
This page in: -- Armenian -- BURMESE -- Chinese -- Dagbani? -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- Thai -- Turkish? -- Twi -- Uzbek -- Yoruba
ဝေစာအမှတ်စဉ်2-- အပြစ်များသော အကျွန်ုပ်ကို သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဘုရားသ
တစ်နေ့ မျက်မမြင်ဆရာတစ်ယောက်သည် အသိမိတ်ဆွေအိမ်ကို အလည်လာကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာကို သူ့ရဲ့လက်ညိုးနဲ့ ထောက်ကာ ကောင်းမွန်စွာ ဖတ်ပြသွားတယ်။ မျက်မမြင်သော ဧည့်သည်ဆရာတော်ကြီးက ချောမွေ့စွာ ဖတ်နေတာကိုတွေ့တဲ့ မိသားစုက အလွန်အံ့သြကာ သူ့ရဲ့လက်ညိုးထိုးတဲ့ စာသားကို စိတ်ဝင်တစား သူနဲ့လိုက်ဖတ်သွားကြသည်။ မျက်မမြင်ဆရာရွေးလိုက်သော ကျမ်းပိုဒ်မှာ “လူနှစ်ယောက်တို့ သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းငှါ ဗိမာန်တော်ပေါ်သို့ တက်ကြ၏။ တယောက်ကား ဖာရိရှဲဖြစ်၏။ တယောက် ကား အခွန်ခံဖြစ်၏။ ဖာရိရှဲသည် တယောက်တည်းရပ်လျက်၊ အိုဘုရားသခင်၊ သူတပါးတို့သည် အနိုင်အထက် လုယူခြင်း၊ မတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်း၊ သူ့မယားကို ပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိသကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်၌ မရှိသည်သာမက ဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင် မဟုတ်သောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ၏။ အကျွန်ုပ်သည် ခုနှစ်ရက်တွင် နှစ်ရက် အစာရှောင်ပါ၏။ ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကို ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့လှူပါ၏ဟူ၍ ဆုတောင်းပဌနာပြု၏။ အခွန်ခံမူကား၊ အဝေး ကရပ်၍ ကောင်းကင်သို့ မမျှော်မကြည့်ဝံ့ဘဲ ရင်ပတ်ကိုခတ်လျက်၊ အိုဘုရားသခင်၊ အပြစ်များသော အကျွန်ုပ်ကို သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဟု ဆုတောင်းလေ၏။” (လုကာ ၁၈း၁၀-၁၃) သူတို့ဖတ် အပြီးမှာ မျက်မမြင် ဆရာက “ကျွန်တော်တို့ အယောက်စီတိုင်း မိမိရဲ့အသက်တာကို ပြန်စစ်ဆေးကြည့် ရအောင်” ငါဘယ်သူလဲ? မိမိရဲ့အသက်တာကို ဖတ်သွားတဲ့ ကျမ်းချက်ထဲက ဘယ်သူနဲ့ နီးစပ်တူညီနေတာလဲ? ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မရှိ ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ ခံယူတဲ့ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လား မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဝန်ခံသော အခွန်ခံကဲ့သို့သော အသက်တာလား? ဘုရားသခင်ကြည်ညိုသောသူလို့ ပြောတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့တဲ့ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသောသူ အမြဲဘုရားကျောင်း သွားကာ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ခါ တောင် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်း ကူညီထိုက်သောသူများကို ကူညီကာ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းသော သူသည် ဘုရားသခင် ကြည်ညိုသောသူလို့ မထင်ရဘူးလား? ဟောင်းနွမ်း မိုက်မှောင်နေသော အခန်းငယ် လေးထဲက အသက်ကြီးအဘိုးအိုရဲ့ ဆုတောင်းသံသည် ဘုရားသခင် နားထောင်ကာ ဆုတောင်းပြည့်စေ ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချကာ ဘုရားသခင်ကို ချီးမြှောက်၍ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချည်းကပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရပြီး ဆုတောင်းခြင်းကို ပြည့်စေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ကို မချီးမြှောက်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်း အတတ်ပညာ၊ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချီးမြှောက်ကာ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကာ ချည်းကပ် ဆုတောင်းရင်တော့ ချီးမြှောက်ခြင်းကို မခံရဘဲ နှိမ့်ချခြင်းကိုသာ ခံရမည်ဖြစ်သည်။”
မျက်မမြင်ဆရာက ဆက်ပြောကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘုရားတရားလုပ်လှချေလို့ ခံယူကာ စိတ်နှလုံး ခိုင်မာသောသူသည် မာနကြီးသောသူ ဖြစ်တယ်။ ကျမ်းစာကို အလွတ်ရွတ်ပြနိုင်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာ ဘုရားသခင်ကို တကယ်မတွေ့ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုလည်း ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ အပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ သူတို့ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်း တတ်နိုင်စွမ်းကိုသာ အားကိုးတတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ ဘုရားတရား ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသော်ငြားလည်း ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရင် ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်း ပယ်ရှားပေးတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချီးမြှောက်ကာ ဆုတောင်းခြင်းကနေ မာနကြီးခြင်း၊ အထက်စီးဆန်လိုသော စိတ်၊ အာခံသောစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ရည်ညွန်းပြီး တောင်းတာမဟုတ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့တတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ဆုတောင်းနေကြ တာလား? မိမိရဲ့ ဆုတောင်းခြင်း ထဲမှာ ဘုရားသခင်နဲ့ သူ့ကိုချီးမွမ်း ကျေးဇူးတင်အသနားခံတဲ့ ဆုတောင်းခြင်းတွေလား မဟုတ်ရင် ကိုယ့်လူမျိုး ဂုဏ်အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ချီးမြှောက်နေကြတာလား? အဲဒီအချိန်မှာ လူငယ်တစ်ယောက်က မျက်မမြင် ဆရာကို မေးလိုက်သည်မှာ “ဘာအတွက် ဆုတောင်းစရာလိုလို့လဲ? ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ ရလဒ်က ဘာဖြစ်မလဲ? ဘယ်ဘုရားသခင်က ငါတို့ဆုတောင်းသံတွေကို နားထောင်နေ တာလဲ? ” မျက်မမြင်ဆရာက ပြန်ပြောလိုက် သည်မှာ “မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကောင်းသောသူတစ်ယောက်သည် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထက် ကျော်လွန်ကာ စက်ဝိုင်းကို တွေ့ရှိနိုင်မလား? မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထက် ကျော်လွန်ကာ မတွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာကြီးက စက်ဝိုင်းလို လုံးဝိုင်းတာကို ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာဖြင့် မြန်မာပြည်ကနေ အမေရိကန်ကို ဖုန်းဆက်တဲ့အခါ အကွာအဝေးဘယ်လောက် ဝေးဝေး ဖုန်းပြောမယ့် သူရဲ့ အသံကို ကြားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိလို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်သူသားသမီးရဲ့ ဆုတောင်းသံ၊ နှိမ့်ချသောနှလုံးသားရဲ့ ရင်ခုန်သံ၊ တောင်းလျှောက်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးကာ ဆုတောင်းသံကို ကြားသော ဘုရားသခင် ဖြစ်ပါတယ်။”
မျက်မမြင်ဆရာက ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကို ပြန်လှန်ကာ ဒီအခွန်ခံရဲ့ ဆုတောင်းချက်ကို စဉ်းစားကာ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီအခွန်ခံတစ်ယောက်က ဘုရားသခင်ရဲ့ သနားခြင်းကရုဏာစိတ် သူ့အပေါ်ထားဖို့ရန် တောင်းတာကို ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆုတောင်းချက်က မကောင်းသော်လည်း သူများ စီမှာ အခွန်မတရားကောက်သော်လည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ တည်ရှိခြင်း၊ သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာ၊ တန်ခိုးတော်ကို အောက်မေ့ကာ ဘုရားဖက်သို့လှည့် ဦးတည်ပြီး အသနားခံကာ တောင်းလျှောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းသောဘုရား၊ ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအခွန်ခံရဲ့ ဦးတည်ရာ အပြစ်မှ နောင်တတို့ ရရှိကာ အပြစ်သနားခံ ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြီးမားသော ကျေးဇူးကရုဏာတော် ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့ သူ့ရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းအတွက် ကြောက်ရွံ့ကာ ဘုရားထံတော်သို့ သနားခြင်း ကရုဏာ တောင်းလျှောက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတသော ဘုရားဖြစ်ကြောင်းနဲ့၊ သနားပြီးကရုဏာနဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားသောသူလည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ကြောက်စိတ်သည် မကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့ အပြစ်တွေအတွက် တရားစီရင်ခြင်းကိုခံပြီး ထာဝရအပ္ပါယ်ငရဲထဲသို့ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုအပြစ်စီရင်မှာကို ကြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့စိတ်ကို တွယ်ဖက်ထားသောအရာသည် ဘုရားသခင်သည် သနားခြင်းကရုဏာနဲ့ ပြည့်စုံခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုက ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အတိုင်း တရားစီရင်သောဘုရား ဖြစ်သော်လည်း သူ့ရဲ့ကရုဏာစိတ် သည် အပြစ်ပေးဖို့ တရားစီရင်ဖို့ထက် သာ၍ကြီးမားတယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အပြစ်အများ ပြေရာ ပြေကြောင်း ပြုလုပ်နိုင်သည် ဆိုတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအခွန်ခံသည် သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအားလုံးကို ဘုရားသခင် ထံ ပုံအပ်ကာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့ အသနားခံခြင်း ကရုဏာစိတ်ကို တောင်းလျှောက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူသည် “အဝေးကရပ်၍ ကောင်းကင်သို့ မျှော်မကြည့်ဘဲ ရင်ပတ်ကိုခတ်လျက်၊ အပြစ် များသော အကျွန်ုပ်ကို သနားခြင်းကရုဏာစိတ် ရှိတော်မူပါဘုရားလို့” ဆုတောင်း လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မမြင်ဆရာသည် နောင်တရခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ ဆက်ပြောသည်မှာ - “နောင်တရခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့လုပ်မိတဲ့အပြစ်ကိုပဲ ဝန်ချတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ရှေ့တော်မှာ မိမိအသက်တာ သည် မသန့်ရှင်းသောသူ၊ အပယ်ခံရသောသူ၊ ပျက်စီးသောသူကဲ့သို့ ဝန်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာ မိမိရဲ့အသက်တာသည် အမြစ်သည် အမြစ်အတိုင်း ပေါ်ထွန်းပါတယ်။ ဘုရားသခင် ရဲ့ရှေ့တော်မှာ ကိုယ်သည်အပြစ်သား ဘာမှကောင်းတာကို မလုပ်နိုင်သောသူဆိုပြီး မိမိရဲ့အသက်တာ ဖြစ်သည်အတိုင်း ဝန်ခံကာ ဘုရားသခင်လက်ထဲသို့ အပ်နှံလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတချို့သည် သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်ခြင်း၊ ရပ်တည်ခြင်းသည် လူတွေရိုသေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာအပြစ်မှ မလုပ်ဖူးဘူးလို့ ထင်ယောင် ထင်မှား ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရှေ့မှာ တကယ်ရောက်ရှိသွားသော သူတွေက သူတို့သည်ဘုရားရှေ့မှာ ဘာမှဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်သားဆိုတာကလွဲလို့ ဘာမှမမြင်ပါ။ ဒီအခွန်ခံသောသူသည် သူရပ်တည်တဲ့ နေရာ သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကို သူနားလည်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကို နားလည်တော့ သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ အထံတော်သို့ ဦးတည်ကာ သူ့ရဲ့အပြစ်တွေဝန်ချပြီး ကျေးဇူးကရုဏာ ပေးဖို့ရန် ဆုတောင်း ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ နောင်တရတဲ့နှလုံးသားနဲ့ရောက်လာသောသူတိုင်း မကောင်းသောအကျင့်များကို စွန့်ကာ ကောင်းအောင် နေထိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်သော နှလုံးသားဆန္ဒကို ဘုရားသခင်သည် အပြစ်များကို ခွင့်လွတ်ပေးသောဘုရားရှင် ဖြစ်ပါတယ်။”
မျက်မမြင်ဆရာက ဒီအခွန်ခံနဲ့ ဖာရိရှဲကျမ်းတတ်ဆရာ ဆုတောင်းခြင်းကို သခင်ယေရှုက ဘယ်လို တုန့်ပြန်လဲလို့ မသိချင်ကြဘူးလား ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုပြန်လှန်ကာ စာကြောင်းတွေကို လက်နဲ့ထောင် ကာ ဖတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ “ငါဆိုသည်ကား၊ ထိုသူသည် အပြစ်ပြေလျက်မိမိအိမ်သို့ ပြန်သွား၏။ ဖာရိရှဲမူကား အပြစ်မပြေ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ချီးမြှောက်သောသူမည်သည်ကား၊ နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လတံ့။ ကိုယ်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချသောသူမည်သည်ကား၊ ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ ရောက်လတံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၁၈း၁၄)
ဒီစာကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ကိ်ုယ့်ကိုကိုယ် စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာရေး အားကြီးမှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် အားရကျေနပ်ပြီလား၊ ကောင်းသောကုသိုလ်တွေနဲ့ ဂုဏ်ယူနေပြီလား သို့မဟုတ် ကိုယ့်အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ကျေနပ်နေပြီလား? သို့မဟုတ် နှိမ့်ချစွာနဲ့ ဘုရားထံတော်သို့ ရောက်ရှိကာ ကိုယ့်ရဲ့ အပြစ်တွေ၊ လုပ်တဲ့အမှားတွေအတွက် နောင်တရနေပြီလား? “ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူကာ မြှောက်သောသူ မည်သည်ကား နှိမ့်ချခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” ဆိုတဲ့ ကျမ်းချက်ကို သတိရပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နောင်တရပြီး နှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့ ဘုရားထံတော်သို့ လာရောက်သောသူသည် မင်္ဂလာဖြစ်၍ အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းကို ရရှိကာ သနားခြင်းကရုဏာကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးနဲ့ ပြစ်မှားကာ ဘုရားထံတော်မှာ သနာခြင်းကရုဏာစိတ်တောင်းခံကာ နှိမ့်ချသော နှလုံးသားနဲ့ အပြစ်တွေကိုဝန်ချလျက် နောင်တရသော ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့ ဆုတောင်းချက်နဲ့အတူ ဆုတောင်း ရအောင် မိတ်ဆွေ။
“အိုဘုရားသခင်၊ ကျေးဇူးပြုချင်သောစေတနာစိတ်တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ အကျွန်ုပ်ကို သနားတော်မူပါ။ စုံမက် တော်မူခြင်း ကရုဏာများပြားသည်နှင့်အညီ၊ အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကို ဖြေတော်မူပါ။ ဒုစရိုက် အညစ်အကြေးကို အကုန်အစင်ဆေးကြော၍၊ အကျွန်ုပ်ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီဟု ဝန်ချလျက် ကိုယ်အပြစ်ကိုအစဉ်မပြတ်အောက်မေ့လျက်နေပါ၏။ ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားပါပြီ။ ကိုယ်တော်ကိုသာ ပြစ်မှား၍ မျက်မှောက်တော်၌ပင် မတရားသောအမှုကို ပြုပါပြီ။ သို့ဖြစ်၍မိန့်တော်မူချက်သည် ဖြောင့်ပါ၏။ တရားစီရင်တော်မူချက်သည် အပြစ်လွတ်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်သည် မွေးစကပင် အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏။ အမိဝမ်းထဲမှာ ပဋိသန္ဓေယူစဉ်ပင် အပြစ်စွဲပါ၏။ ဟုတ်မှန် ဖြောင့်မတ်သော စိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးထဲမှာ ပညာကိုသွန်သင်တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကို စင်ကြယ်စေခြင်းငှါ၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွန့် နှင့်သန့်ရှင်းခြင်းမင်္ဂလာကို ပေးတော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကိုမိုဃ်းပွင့်ထက်သာ၍ဖြူစေခြင်းငှါ ဆေးကြောတော်မူပါ။ စိတ်သက်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်း၊ စကားကိုအကျွန်ုပ်အား ကြားစေတော်မူပါ။ သို့ပြုလျှင်၊ ချိုးဖဲ့ တော်မူသောအရိုးတို့သည် ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြပါလိမ့်မည်။ အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းဒုစရိုက်တို့မှ မျက်နှာတော်ကို လွှဲ၍၊ အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်း ဖြေတော်မူပါ။ အိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်အထဲ၌ စင်ကြယ်သော နှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါ။ မြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကို အသစ်ပြုပြင်တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော် ထဲက နှင်ထုတ်တော်မမူပါနှင့်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ရုပ်သိမ်းတော်မမူပါနှင့်။ ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကို ပြန်၍ ပေးသနားတော်မူပါ။ ကြည်ညိုသောစေတနာ စိတ်သဘောသည် အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါစေသော။ အကျွန်ုပ်သည်လည်း မတရားသောသူတို့အားတရားတော်လမ်းကို ပြသ သွန်သင်ပါမည်။ အပြစ်ရှိသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်ထံသို့ ပြန်ကြပါလိမ့်မည်။ အိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူသောဘုရား၊ လူအသက်ကို သတ်ခြင်းအပြစ်နှင့် အကျွန်ုပ်ကို ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ။ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူခြင်းကို အကျွန်ုပ်လျှာသည် ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုပါမည်။ အိုထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကို ဖွင့်တော်မူပါ။ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ မြွက်ဆိုပါမည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပင် နှစ်သက်တော်မမူ။ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောယဇ်မူကား၊ ကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေတည်း။ အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျိုးပဲ့ကြေမွသောနှလုံးကို ငြင်းပယ်တော်မမူတတ်ပါ” (ဆာလံ ၅၁း၁-၁၇)။
နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းချက်တွေကို ပို၍သိရှိလိုပါသလား ချစ်သောမိတ်ဆွေ? ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကရုဏာကို ပို၍ သိရှိလိုပါသလား။ မိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့ အခမဲ့စာပေများကိုကျွန်တော်တို့ထံမှ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေရဲ့ သက်သေခံချက်စာစောင်ကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ စာရေးတဲ့အချိန် စာပြန်ပေးဖို့ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံ ရေးပေးထားပါ။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
Page last modified on September 18, 2018, at 10:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)